India Ny fizahantany dia mandeha amin'ny làlana hamaky an'i China, Skandinavia ary Russia
Home » Travel Associations News » India Ny fizahantany dia mandeha amin'ny làlana hamaky an'i China, Skandinavia ary Russia
India dia hanao seho an-dalambe any Shina hanintona mpizahatany maro kokoa avy amin'io firenena io izay manana olona ambony indrindra.
India dia hanao seho an-dalambe any Shina hanintona mpizahatany maro kokoa avy amin'io firenena io izay manana olona ambony indrindra, hoy ny minisitry ny fizahan-tany ao amin'ny Union KJ Alphons raha nanambara ny fandaharam-potoanan'ny India Tourism Mart voalohany. Nilaza ny minisitra fa ny minisiteran'ny fizahantany dia mikendry ny hampitombo avo roa heny ny isan'ny mpizahatany vahiny sy ny karama aminy ao anatin'ny telo taona.
Tamin'ny taon-dasa, nanao “tena tsara” tamin'ny fizahantany i India, hoy izy. Taorinan'ny seho an-dalambe mahomby amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany any Etazonia, ny minisitera dia hanao hetsika mitovy amin'izany any Rosia sy any amin'ny firenena Avaratra ao anatin'ny roa herinandro, hoy izy tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety. “Hanao seho an-dalambe be any Shina koa izahay satria io no betsaka indrindra ny fitsidihan'ny mpizahatany. Tamin'ny taon-dasa dia nisy mpizahatany 144 tapitrisa nivoaka. Tsy nahazo afa-tsy 2.50000 tamin'izany i India ka hihetsika isika ka hiakatra tampoka ny isa, ”hoy i Alphons.
Sambany, niampita marika 10 tapitrisa ireo vahiny tonga mpizahatany tany India tamin'ny taon-dasa. Niaraka tamin'ny mpitsidika NRI, dia eo amin'ny 16.5 tapitrisa eo ho eo ny mpizahatany iraisam-pirenena (FTA), hoy izy. “Ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo mpizahatany vahiny dia 15.6 isan-jato raha oharina tamin'ny taon-dasa. Niakatra 20.8 isan-jato ny taratasinay avy amin'ny FTA. ”
Ny India Tourism Mart (ITM) voalohany indrindra, hotontosaina amin'ny 16 ka hatramin'ny 18 septambra AT Vigyan Bhavan eto, dia fiaraha-miombon'antoka amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy ny federasionan'ny fikambananan'ny fizahan-tany sy fandraisana vahiny indiana (FINOANA), tohanan'ny fanjakana sy ny sendika amin'ny faritany. "Amin'ny alàlan'ny ITM dia manandrana mahazo mpividy tsara indrindra eran'izao tontolo izao izahay ary mifanena amin'ny mpivarotra ao aminay, toy ny governemanta fanjakana, mpandraharaha mpizahatany, mpiasan'ny fizahan-tany ary mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany hafa," hoy ny minisitra.
Ny sekretera momba ny fizahantany Rashmi Verma dia nilaza fa ny hetsika dia hanampy ny fanjakana hanatona ny tsenan'ny fizahantany manerantany ary haneho ny vokatr'izy ireo raha mifanena amin'ireo mpitarika indostrialy ambony manerantany. Nilaza ihany koa izy fa ny tetika nataon'ny Minisiteran'ny Fizahan-tany hanome karatra SIM ho an'ireo mpizahatany vahiny tonga eto amin'ny firenena dia “notohizana” satria tsapa fa “tsy ilaina” izao.
Tanjona ny hetsika hisarihana ny mpividy, ny influencer ary ny bilaogera mihoatra ny 300 manerana an'izao tontolo izao amin'ny fikasana hamorona tsena manerantany ho an'ireo mpandray anjara amin'ny fizahan-tany Indiana, anisan'izany ny faritra, hotely, fizahan-tany ary fitaterana.